18°44′00″S 47°34′00″E﻿ / ﻿18.733330°S 47.566670°E﻿ / -18.733330; 47.566670
Ambohimanga dia anisan' ny vohitra masina roa ambin' ny folo ao Imerina. Miala 15 km an' Antananarivo no misy azy. Toerana fonenan' ny mpanjaka sy ny mponina taloha amin' ny faritr' Imerina. Manana tantara sy tahiry maro io toerana io. Nanomboka tamin' ny taona 2001 dia toerana ao anatin' ny tahiry iraisam-pirenena UNESCO ity. Misy ny rova azo tsidihina. Tao amin' io tanàna io no nahaterahan' Imboasalama izay lasa Andrianampoinimerina taty aoriana. Mifefy tamboho izay vita amin' ny akoran' atody io rova io.
1 Tantara nalaina tao amin' ny Arsiva nasionaly Archived Jolay 8, 2017 at the Wayback Machine
1.2 Tamin' ny andron' Andrianampoinimerina
1.3 Taty aorian'Andrianampoinimerina
1.4 Faha fanjanahantany
Tantara nalaina tao amin' ny Arsiva nasionaly Archived Jolay 8, 2017 at the Wayback MachineHanova
Renivohitr’ Imerina izy taloha ary iray amin’ ireo tanàna telo lehibe mandrafitra an’ Antananarivo Avaradrano (Ilafy, Ambohidrabiby, Ambohimanga). Renivohitry ny foko hova Tsimahafotsy ihany koa.
Tsimadilo no anaran-tany niorenan’ Ambohimanga fahiny elabe ary ny tanàna dia Mahandrihono. Izany Andriamborona izany no nanao azy hoe Ambohitrakanga, ary Andriamasinavalona (na Andriantsimitoviaminandriana zanany) kosa no nanova azy ho Ambohimanga.
Andriamborona, fianakavia-mpanjaka avy tany Imamo, Ramasoandrobe rainy, Ratompobe reniny, ary ny vadiny sy Ampanarifito anadahin-dreniny, hoy ny lovan-tsofina, no andriana nonina voalohany teny Ambohimanga ary milevina eo Andranomboahangy.
Andriamasinavalona izay nanjaka teto Antananarivo no naka tsikelikely ny tanàna tamin’Andriamborona ho an’Andriantsimitoviaminandriandrazaka, anankiray tamin’ireo zanany efa-dahy izay nizaràny an’Imerina.
Andriantsimitoviaminandriana àry no tena mpanjaka voalohany tao Ambohimanga (1675-1710 na 1740-1755). Raha vao handray fanjakana izy dia nampanao fianianana intelo miantoana ny vahoakany izay tonga fomban-tany: mivelirano ao Andranoritra, dobo kely ao akaikin’i Mangabe; avy eo dia misotro vokaka ao Andakana, ambany andrefana am-body tanàna; ary farany dia milefona omby ao Fidasiana (na amin’ny toerana hafa) ao an-tampon-tanàna.
Nanao vavahady fito tao anaty tanàna i Andriantsimitoviaminandriana: Ambavahaditsiombiomby tao atsinanana, Ambodiaviavy tao avaratra atsinanana, Ampanidinamborona tao avaratra, Andranomboahangy tao avaratra andrefana, Ambavahadimasina tao andrefana, Ambavahadimahazaza tao atsimo, Ambavahadikely tao avaratra.
Na dia voalaza ho nonenan’Andrianjaka aza Ambohimanga, dia tamin’ ny andron’ Andriantsimitoviaminandriana no tena niantombohan’ ny lazany ary tamin’ Andrianampoinimerina no nampamirapiratra azy indrindra.
Tamin' ny andron' AndrianampoinimerinaHanova
Tao Ambohimanga no niantomboka nanjaka Andrianampoinimerina vao namindra ny renivohiny ho eto Antananarivo taty aoriana. Nohamafisiny ny fiarovana ny tanàna: novitainy ny hadivory ivelany izay efa nisy kely teo aloha ary dia nampana hadivory tao anatin’io indray. Nasiany vavahady fito ny tanàna: Ambatomitsangana tao atsinanana, Andakana tao andrefana, Amboara tao avaratra, Miandrivahiny tao andrefana-avaratra, Ampitsaharana tao atsimo-andrefana, Andranomatsatso tao atsimo, ary Antsolatra tao atsimo-atsinanana. Raha natao ho fivoaham-paty Amboara sy i Miandrivahiny, ny telo atsimo (Ampitsaharana, Andranomatsatso, Antsolatra) kosa natao ho fitiliana fahavalo.
Nizarana tanimbary teny amin’ ny manodidina ny mponina.
Nataon’ Andrianampoinimerina mafy koa ny lalàna momba ny fahadiovana tao Ambohimanga: fady ny manary loto; ary na dia ny katsaka sy ny voatavo aza dia tsy navelany nambolena tao; natokana toerana tany ivelan’ ny tanàna nandritry ny 3 hatramin' ny 6 volana ny olona voan’ ny nendra.
Nataony tanàna masina foiben’ ny fivavahana amin’ ny sampy koa Ambohimanga: ny sifotra, ny sokina, ny kisoa, ny soavaly, ary ny vahiny hafa firenena dia tsy navelany niditra tao. Ny fantàka dia tsy azo nataina noho izy mitovy anarana amin’ ny sampy Fantàka tao an-tanàna.
Nanao lalàna mafy koa Andrianampoinimerina mba tsy hanimbasimbana ny ala: “Izay manongotsongo ny ala dia mba hotsongotsongoin’ Andriamanitra “, hoy izy; omby iray sy vola ariary no sazin’ izay mandika izany. Raha misy tera-bao anefa dia azo angatahan-dalana hakana kitay ao an’ ala ihany.
Nataon’ Andrianampoinimerina ho Amparihy na Amparihimasina ny anaran’ny dobo tao am-body tanàna. Tao no fakàna rano handroan’ny andriana mbamin’ny hanaovana hasoavana ary hisantarana ny tao-tranon’ny mpanjaka.
Ireto avy ireo toerana manan-tantara ao Ambohimanga:
Ambatomiantendro: vatolampy avo eo an-dohasaha atsimo Atsinanana izay fitazanana sy fanaovana fanorona fanitaran-tsaina.
Ambatorangotina: teo ny loholona 12 lahy tamin’ny Tsimahafotsy no nilaza ny fanonganana an’Andrianjafy (zanak’Andriambelomasina zanak’Andriamasinavalona) sy ny fananganana an’Andrianampoinimerina (zanak’anabavin’Andrianjafy).
Fidasiana: kianja malalaka alokalofan’ny alan’amontana ao an-tampon-tanàna izay nasian’Andriatsimitovinandriana orimbato (tonga vatomasina fitaingenan’ny andriana rehefa miseho, fikabariana amin’ny vahoaka, fandrarahana ny ran’ny omby volavita izay isaorana amin’ny Fandroana).
Telo no rova ao an-tanàn’Ambohimanga:
Bevato ao Fidasiana (avaratra indrindra) nonenan’Andriatsimitoviaminandriana
Mahandrihono (avoavo kokoa ny misy azy) nanaovan’Andriambelomasina fahavelon-drainy trano, dia Mahandry.
Nanjaka no lapa fahatelo (eo an-tendron’ny avon’ny tanàna, avaratra atsinanan’i Mahandry).
Nisy sampin’andriana sy ny forongony notehirizina tao Ambohimanga:
Fantàka izay mpiaro amin’ny ady. Tsy navela ho faty jiro ny efitra nisy azy tao Bevato.
Manjakatsiroa. Tian’Andrianampoinimerina indrindra izy io ka nentiny nanaraka azy mandrakariva. Tao Manjakamiadana (Ambohimanga) no nisy sy nandorana azy tamin’ny 1869.
Ny forongon’i Kelimalaza fa ny tena sampy Kelimalaza kosa tsy niala tao Ambohimanambola. Nisy forongon’io sampy io koa tany Amparafaravato (avaratr’Ambohimanga).
Nasian-dRadama rainy sekoly tao Ambohimanga.
Tamin-dRasoherina nitoetoetra teny Ambohimanga no nisy niadian’izy sy Rainivoninahitriniony Praiministra dia nirintona nankany Antananarivo ny Praiministra. Izay no nohararaotin-dRainilairivony zandriny hahazoana ny toeran’ny Praiministra (14 jolay 1864).
Taorian’ny namonoana an-dRadama II dia toa nitambesaran’ny nenina Rainivoninahitriniony ka nivary lavo tamin’ny fisotroan-toaka. Tsy vitany intsony ny raharahany ary nanjary nahery setra izy rehefa mamo ka tsy nahay nanaja ny mpanjaka intsony ary sahy nandevilevy azy sy namely diamanga sy totohondry aza indraindray. Kanefa tamin’izany andro izany dia heloka mahafaty na dia ny mandronjina ny mpanjaka fotsiny aza. Koa tezitra tamin-dRainivoninahitriniony na ny mpanjaka na ny mpanao fanjakana ambony na ny vahoaka ka dia naongana tsy ho Praiministra izy ary Rainilaiarivony zandriny no nosoloan’ny mpanjaka azy.
Tamin’ny andron-dRanavalona II, mpanjaka kristiana voalohany, raha any Ambohimanga izy no miangona dia teo Fidasiana no atao ny fotoam-pivavahana noho ny hamaroan’ny vahoaka.
Ambohimanga no toerana ivelan’Antananarivo nanorenana fonena-misionera voalohany taorian’ny fanenjehana. Dr J.Sibree no teny. Teo Alakamisy (ambany atsimo), dia vao teo Antoby (ambany avaratra atsinanana andrefana) no nitoetra izy fa tsy azo niakaram-bazaha moa ny tanàna.
Ny hasin’Ambohimanga sy ny hajany (noho ny nanandratan’Andrianampoinimerina azy indrindra) dia hita sy voatahiry amin’ny fanononana azy mandrakariva alohan’Antananarivo hoe “Ny saotra sy ny arahaba dia miakatra any Ambohimanga sy Antananarivo”. “Tsy misaraka Andriana amin’Ambohimanga sy Antananarivo”.
Tsy mba avadika na oviana na oviana ny mpanjaka araka ny fomba malagasy kanefa nafindran’i Jeneraly Galliéni tao amin’ny Tranofitomiandalana tao Antananarivo ny taolambalon’Andrianampoinimerina sy Ranavalona I ary Ranavalona II tamin’ny martsa 1897 rahefa nisy nataony ho mahamety izany momba ny fampandrian-tany.
Boky firaketana ny fiteny sy ny zavatra malagasy; p.359-362
Dictionnaire historique et géographique de Madagascar; p.29
Tantaran’i Madagasikara isam-paritra; p.530-531
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambohimanga&oldid=1015371"
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 14:19
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 14:19 ity pejy ity.